Firenena 10 malaza be indrindra notontosain'i drone tamin'ny taona 2019
Home » Travel Technology News » Firenena 10 malaza be indrindra notontosain'i drone tamin'ny taona 2019
Rehefa lasa mora entina kokoa ny drôna, ny mpizaha tany dia naka ny fakantsariny manidina erak'izao tontolo izao mba hisamborana ny planeta manaitra antsika amin'ny fomba fijery eny amin'ny habakabaka.
Fa firenena iza no malaza indrindra amin'ny mpanamory fiaramanidina drone tamin'ny taona 2019?
Tranonkalan'ny vondrom-piarahamonina an-tserasera ho an'ny mpanamory fiaramanidina drone sy mpankafy ny habakabaka - nanangona ny lisitry ny firenena ambony indrindra amin'ny horonantsary drone. Miorina amin'ny toerana misy ny horonan-tsary nakarina tao amin'ny tranokalan'ny haino aman-jery drone ny laharana nanomboka ny 1 Janoary ka hatramin'ny 31 Desambra 2019.
Etazonia no firenena be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao nandritra ny taona 2019. Tafiditra ao anatin'izany ny horonantsary avy amin'ny faritra ambany 48, miaraka amin'ny sary maro avy any an-tendrombohitra Alaska sy ny morontsirak'i Hawaii. Ny horonan-tsary avy any Etazonia dia nahitana sary nalaina tamina fakantsary nentin-drazana nampiasana drôna toy ny DJI Mavic 2 Pro malaza, ary koa ireo horonan-tsary hijerena olona voalohany avy amin'ireo mpanamory fiaramanidina drone manerana ny firenena.
Torkia, Royaume-Uni, Italia ary Frantsa no namorona ny firenena dimy voalohany be mpanelanelana.
Ny ankamaroan'ireo horonantsary avy any Torkia dia nanasongadina ny renivohitra Istanbul manan-tantara. Toerana malaza iray hafa any Torkia izay nasehon'ireo mpanamory fiaramanidina drone dia Cappadocia, malaza amin'ny balaonina rivotra mafana sy ny endrika miavaka.
Nandehandeha eran'ny United Kingdom tamin'ny taona 2019 ny mpanamory fiaramanidina, miaraka amin'ireo horonantsary manomboka any Irlandy Avaratra ka hatrany Wales mankany Scotland ka hatrany amin'ny faritra maro any Angletera. Angamba tsy mahagaga raha i Italia sy i Frantsa - toerana itobian'ny mpizahatany amin'ny karazany rehetra - samy nanao ny lisitra.
Espaina, Alemana, Aostralia ary Indonezia dia nanarakaraka ireo firenena efatra manaraka tamin'ny lisitra, raha i Gresy kosa no firenena 10 notarihin-tànana be indrindra tamin'ny taona 2019.
Ity ny top 10:
Ho an'ireo mitady hitondra drôna mandritra ny dia amin'ny taona 2020, dia aza hadino ny manamarina ny lalàna sy ny lalàna momba ny drôna ao an-toerana hahazoana antoka fa mandeha soa aman-tsara ara-dalàna ianao.
Ireo horonan-tsary rehetra ireo sy ny maro hafa dia azo alefa amin'ny fahitalavitra ankehitriny, misaotra an'i Drone TV.